I-Recipe Ingulube ene-sinamoni kunye nesardadi
I-mustard - i-sauce epheleleyo yengulube Inyama yengulube kunye ne-sinamoni kunye nesardadi - isitya esinomsoco esele sipheka ngexesha lokupheka wonke umntu uya kugijima umquba. Ukulinda ingulube ngesardadi ephuma kwi-oven kukuxhatshazwa ngokwenene. Isitya sisilula, kodwa ukudibanisa kwenkomo yengulube kunye ne-mustard ye-piquant yavumelana ngokufanelekileyo. Imfihlelo kukuba i-mustard yenza ingulube ibe nefuthe kakhulu kwaye iyancwina, kwaye ngexesha lokushisa ukutshatyalaliswa kwayo yonke ubukhali bayo iphela, ngoko ungakhathazeki ukuba isidlo siya kuba sibukhali ngenxa yesardadi. Iigrafu ziza kubonakalisa ukuvumba kwayo kunye nokudibanisa ngokupheleleyo kuya kudibanisa nesinamoni esityebileyo, eya kunika isitya sonke "Ingulube kunye nesardadi" into enhle kwaye ingachazeki. Zama ukupheka ingulube kunye nesardadi ubuncinane kanye, kwaye awuyi kuphinda ulibale le ndawo. Kwaye konke kulungiselelwe ngokulula, kwakhona kwakhona ukuqinisekisile ilizwi elidumileyo malunga neengqondo zonke ... Ngoko-ke, imiyalelo yesinyathelo ngesinyathelo sokutya kweengulube kunye nesardadi kunye nesinamoni.
Ingulube yeengulube 600 g
Iigallic 6 izidumbu
I-cinnamon powder 2 tsp.
Isinyathelo 1 Geza uze usomise ingulube, uze uthathe iinqununu malunga nobubanzi obu-1 cm, udibanise kancane, uphefe ngobuninzi amaqabunga ama-5-6 wesardard, ugubungele ngesilwanyana sokutya uze ufake efrijini imizuzu engama-40-50.
Inyathelo 2 Hlahla iinqununu eziyi-6 zegalikhi uze udibanise ne-4-5 tbsp. l. Ioli ye-sunflower, i-1-2 pinches emnyama, 2 tsp. i-sinamoni kunye ne-2 tsp. ityuwa.
Inyathelo lesi-3 Lungisa umxube obangelwayo ngalunye udidi lweengulube, ubeke kwindawo ephepheni elibhakabhaka kwaye ugubungele iphepha lokubhaka. Faka ihovini elifudumeleyo ukuya kwi-200 ° C uze upheke imizuzu engama-30-40.
Inyama kwi sauce
Inyosi ebhaka ibhakoni
Hlulela elwandle kunye nezidlo ezintle: imibala ephathekayo yempahla, i-Spring-Summer 2016
Marmalade ye quince
I-recipe yeekuki ezicolileyo kunye nezibikezelo
Inkomo yenze i-peas